Indawo yase China - Amalungelo oluntu kunye nobuGcisa bokuKhanya ngu ∴ PixelHELPER Foundation
Iphulo lamaSilamsi eUighurs eTshayina / kumalungelo oluntu
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 7. Epreli 2016
Pixel Mncedi ixhasa ukuzimela kwee-Uighurs, eHong Kong, eTaiwan naseTibet
ANge-29.07.2019 kaJulayi, 1 sipapasha ividiyo yokuqala yesikhumbuzo sethu se-Uighur e #Marrakech, sabhalela onke amaphepha-ndaba ase-Arab malunga noko sikwenzileyo kwaye asifumana mpendulo emva kokuba sithe kumaphephandaba ukuba umqolo wokuqala wesikhumbuzo ngowamaJuda athandana namanye isikhumbuzo njenge- "Holocaust Memorial of Marrakech" kwimbali yaseMorocco. Inzondo ngokuchasene nobumbano kunye ne-Uighurs yamaSilamsi yaphumelela. Kude kube namhla, akukho lizwe lamaSilamsi emhlabeni lixhasa i-Uighurs njengoko beyidinga. Ndiyathemba ukuba kwiminyaka eli-100 isikhumbuzo sokuqala sabantu base-Uighur Muslim Turkic siya kuba yinto eguqukayo kumanyano lwamazwe amaSilamsi ngeUighurs.
Sisonke sifuna ukwakha kwakhona sonke isakhiwo esitshabalalisile iChina kwamanye amazwe kwaye siyishiya ikwindawo ethile ngeenjongo zokungavumeli iChina itshabalalise inkcubeko yase-Uighur.
Ukuba amaTshayina angachitha iicawa ezili-1000 1000, bekuya kubakho ingqumbo enkulu eYurophu. Umlilo kwi-cathode ray unokutshisa ubumbano lwehlabathi apha. I-XNUMX mosque kunye neecawe zobuKristu sele zitshatyalalisiwe e-China. Sinikezele ngazo zonke ii-Uyghurs ukuba sizakhe njengeyona kopi ichanekileyo phesheya ukuze sidale ubumbano kubantu abacinezelekileyo abangamaSilamsi kwihlabathi liphela. Ngelishwa, uninzi lwee-Uyghurs zibalekile okanye kwiikampu zokuphinda kufundiswe eTshayina kwaye ziswele. Yiyo loo nto simisele umxhasi wengxowa-mali yeGoFundme. Kuxhomekeka ekubeni siqokelela malini, nokuba singakha ithala leencwadi, i-mosque okanye ingcwaba.
I-China itshabalalise ngaphezulu kwe-3 mosque, amangcwaba kunye neetempile kwiminyaka emi-1000. I-Beijing itshabalalisa inkqubo nenkolo yee-Uyghurs zamaSilamsi. Imifanekiso yesethelayithi ibonisa umfanekiso owoyikisayo. Pixel Mncedi uya kubeka umzekelo kwaye akhe kwakhona ingcwaba lika-Iman Asim elonakalisiweyo kwiintaba zaseMoroccan kunye ne-plaque yokukhumbula ukutshatyalaliswa ngamaTshayina. Olunye ulwazi malunga neprojekthi
Sifuna idemokhrasi e-China. Kwaye amazwe akho e-Uyghurs, eHong Kong, eTaiwan naseTibet. Umbutho wamaKomanisi kufuneka uchithwe kwangoko. Ukukhanya okucacileyo kwehobe
Sifuna inkululeko yezenkolo e-China, ukuhlonipha amalungelo abantu kunye nonyulo lwentando yesininzi kwikamva elingcono. Zonke iimosque kufuneka ziphinde zakhiwe ngeendleko zase China, zonke #Uiguren Kumele ukhululeke ukuba usebenzise ukholo lwakho.
Nanini na xa iYurophu iyathuthumela, i-Uighure iyathuthuzela ukuhlushwa. E-China, i-Islam ivinjelwe, iphupha le-idiots elifanelekileyo. Imikhosi ye-200 yachithwa, amaShayina afuna ukwazi nge-garnix. Ingxowa yama-Uighurs, kwaye uhleka kwisibini. Nabani na okholelwa ku-Allah e-China, ufumana abantwana bephangiwe ebuthongweni.
Kwaye ke onke amaSilamsi awekho, utshilo u-Xi Jinping owayemnandi kakhulu. Kuba ubukele yonke imithombo, kodwa imali yaseTshayina usenokuba unayo. Kodwa ke ubonakala ngathi ukude kude, okwangoku, i-Uigure isemdaka. IKoran yitikiti elungiselelwe itikiti lokuhlaselwa kwinkampu yoxinaniso.
Ukuhlanjwa kwengqondo ye-Uyghurs, uMohammed wayengeke ayivumele loo nto. Ndikhwele ukuya eludongeni lwaseChina kwaye ulale, ulindile. Ngaba uya kuthumela abakhweli bakhe eHong Kong, eTibet nangaphambili. Onke amaSilamsi angadibana ngasemva kwaye u-Xi Jinping angaphuma. E-China kukho idemokhrasi emva koko kwaye ayizange iphinde ibe yi-Islamophobia.
Ngaphandle kweenkampu zemfundo kunye nokuvavanya okufutshane, urhulumente waseTshayina ophakathi uzama ukukhusela ukuphazamiseka kweli phondo. Ubukho bezinto ezinjalo zaqinisekiswa ngokusemthethweni nguRhulumente ngo-Oktobha 2018, kodwa ngexesha elifanayo laphika le ngongoma yokuphathwa kakubi apho.
Kwi-Uighurs, i-Turkvolki yamaSilamsi kwiphondo laseTshayina iXinjiang, okuninzi kuguqulile kwiminyaka yamuva (ifoto esuka kwi22.09.2013, amanxuwa e-mosque edilikileyo eKashgar). Kodwa nkqu nobunkokheli bezopolitiko eBeijing kwafuneka bayiqonde into yokuba elona phondo likhulu kwiNtshona yeRiphabhlikhi yaBantu ayifumaneki.
Ubupolitika baseTshayina eXinjiang buyafana nakwabo bakwiBuddhist iTibet: ubuhlanga baseTshayina kwaye iinkampani zabo kujoliswe kuzo. Ikwangabo bangenelwa ikakhulu kwiinkqubo zikarhulumente zokusetyenziswa kunye notyalo-mali. Ezikolweni, ulwimi lwasekhaya luthathelwa indawo ngakumbi nguMandarin. Ke ii-Uighurs zibalekela kwinkolo ukuze zigcine isazisi sabo. Okukhona urhulumente ecinezela i-Islam, kokukhona kuya kuba lula.
Sifuna ukukhutshwa kwangoko kwazo zonke ii-Uyghurs kunye nokwaziswa
inkululeko yenkolo eTshayina. Wonke umntu angakholelwa kwinto ayifunayo, kwisilo esiphaphazelayo okanye kwenye yeenkolo zehlabathi. I-China kufuneka iyeke ukuthintela abantu bayo ekusebenziseni inkululeko yenkolo. Inkululeko yenkolo yinxalenye yomgaqo-siseko waseJamani- umgaqo-siseko waseTshayina kufuneka uthathe oku njengomzekelo.
Iphulo lamaSilamsi eUighurs eTshayina / kumalungelo oluntu NgoFebruwari 24th, 2021Oliver Bienkowski